The Most Zvinoshamisa Africa In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > The Most Zvinoshamisa Africa In Europe
Looking Rinonyanya Zvinoshamisa Africa In Europe? Zvadaro verenga pamusoro! Tinoziva uchisarudza yunivhesiti iri rinokosha sarudzo. Ehe saizvozvo, munhu anofanira kufunga kudzidzisa uye zvivako kudzidza kuti inopa kuyunivhesiti kana kusarudza imwe kuenda. zvisinei, dzimwe nguva mumwe dumbu kunzwa zvakanaka kuenda mberi zvakare. pano pa Save A Train isu takaita dzimwe tsvakurudzo iyi kwamuri uye vakanyora mazita Most Zvinoshamisa Africa. Vose dundundu yevedza akitekicha. Vamwe vane zvinoshamisa nhoroondo, asi vamwe zvikuru yakanga ichangotangwa mumayunivhesiti vari dzaishandiswa pamusoro pamazita ichi. Ivo kupa zvakawanda panguva aesthetic zvivako modernist uye unyanzvi zvinhu. Ngationei kuti chii chaunofarira!
University Of Bologna, Itari
The University of Bologna mu Itari anoonekwa sezvo yunivhesiti dangwe dzenyika, wakati yakateyiwa mu 1088. Iyi ndaza kuna Most Zvinoshamisa Africa mu Europe, asi ichi kunganzi chimwe chezvinhu zvinoshamisa mumayunivhesiti munyika. Aimiririra pazasi ndiye Palazzo Poggi, mumwe mukuru zvivako kuyunivhesiti. It dzimba vatatu kuyunivhesiti wacho mamiziyamu pamwe kuratidzira pamusoro dzinongoitika nhoroondo, anatomi, Obstetrics, Physics, uye kemesitiri. Ehe, iwe verenga zvakanaka kuti. Vane mamiziyamu dzavo!
Asi havasi ivo chete zvivako munofanira kushanyira kana scoping kunze Most Zvinoshamisa Africa. Kune dzimba zhinji mukati kuyunivhesiti kuti unofanira kupfeka yenyu vanofanira-kushanya mazita. Izvi zvinosanganisira College of Spain, mumwe pingi, cloistered chivakwa pakusanganisirawo vose Gothic uye Renaissance zvinhu zviri kugadzirwa kwayo. Uyewo yomufaro mapurani, yunivhesiti musha ane 2-hectare botanical mubindu.
Nokuda kwayo nechepakati nzvimbo uye jogirafi, Bologna yambokurukurwa kupinda rimwe zvikuru njanji senga hubs ose kuchamhembe kweItaly. Zvinonyatsozivikanwa chaizvo zvakanaka zvine chokuita nedzimwe makuru Italian nzvimbo.
Bologna ndiye 37 maminitsi kubva Florence
2-hr 20-Maminitsi kubva Rome
2 maawa kubva Venice
1 awa kubva Ferrara
A ano mukuru-nokukurumidza njanji mutsetse inobvumira richisvika Milan mu anenge 65 maminitsi.
Rimwe bazi mutsetse uyu richibatanidza Bologna neRoma.
Side chitsamba: Nepo achitora kudzidzisa kumaodzanyemba kubvira Milan, usakanganwa kubata muchidimbu Duomo vakahwanda pamusoro Bologna kumaodzanyemba. Ndizvo kunyanya dzinonakidza pakuvira kwezuva.
Venice kuna Bologna Zvitima
Florence kuna Bologna Zvitima
Rome kuna Bologna Zvitima
Milan kuna Bologna Zvitima
University Of Rostock, Jerimani
The University of Rostock haisi chete mukuru yunivhesiti iri kuBaltic Sea Region; zviri zvakare vakapfuma mune tsika. Uye chokwadi, mumwe Most Zvinoshamisa Africa In Europe. Sezvaanobviswa rakaumbwa 1419, nokukurumidza kupemberera yayo 600th gore. It uchange uri refu tsika tichidzidzisa vadzidzi uye kutsvakurudza. The Gothic-vachinzi zvivakwa, pamwe chete muti-mudungwe mikana uye mumapaki kuita zvinoshamisa ezvinhu. At nechepakati yunivhesiti Nde chivakwa ziso-nokukwezva izvo mwoyo isu pakutanga kuti kuwedzera uku The Most Zvinoshamisa Africa. Ndizvo rakamiswa pakatarisana imwe paki uye chitubu, munhu akakwana nzvimbo vadzidzi uye vashanyi yokuva kuyemura akapfuma kunze kweimba.
The University of Rostock inoumbwa mapfumbamwe zvetsika mano uye mumwe nechepakati interdisciplinary kodzero umo masayendisiti uye vadzidzi vaibva mano zvose batsira kutsvakurudza muminda zvikuru zvina:
upenyu, chiedza, uye basa
Kuchembera vanhu uye vanhu
ruzivo – tsika nemagariro – kushandurwa
The University of Rostock mumwe mumayunivhesiti German navanopinda chaizvo siyana nyaya. Rinopa zvinopfuura 100 mapoka: 34 kupedzisa ne bachelor, 56 pamwe dhigirii tenzi wacho, 37 (kusanganisira vadzidzisi) aine ongororo ehurumende uye 3 aine Ph.D. Uyezve, Centre nokuti Mudzidzisi Training uye Educational Research haadi chete kuitisa tsvakurudzo inodzidzisa asi rinoshandawo pamusoro chekunatsiridza mudzidzisi kudzidzisa.
Unoda kuziva sei kuti mumwe Most Zvinoshamisa Africa In Europe? Hazvinei mirayiridzo muri parwendo kubva (e.g. Rostock kana neSchwerin, Berlin kana Hamburg), kutora chitima kusvikira wasvika Wismar kuchiteshi chechitima. kubva pano, unogona bhazi kuti bhazi-chemabhazi muna J.-R.-vaBhekeri-tiellä nokushandisa mitsetse 4 kana G (kurutivi Ostseeblick) kana B-D (kurutivi Seebad Wendorf). Inongova yemaminitsi chete vanofamba kubva ichi bhazi-rurege mhiri motokari Park kuti pachikoro.
(Nokuti pomumbure plan muguta bhazi pakutengeserana, Nguva uye mitengo, tapota vanoshanyira Website of Hanseatic taundi Wismar.
Berlin kuna Rostock Zvitima
Hamburg kuna Rostock Zvitima
NeSchwerin kuna Rostock Zvitima
Wismar kuna Rostock Zvitima
Aarhus University, Denmark Ndiye Zvinoshamisa Our Last Africa In Europe
Aarhus University riri muguta rechipiri pakukura Denmark uye kunoratidzwa kwayo mitema kembasi, wakakwana dziva. The yunivhesiti iri muenzaniso sei zvivako nevanhu uye vakakwana rwokuzvarwa zvakatipoteredza anogona kushanda maererano hwakakwana. Achiratidza huru chivakwa, zvakakwana. Vazhinji zvivako zvakagadzirwa Danish mapurani C.F. Moller ari modernist magadzirirwo unoratidza wechiduku ari kuyunivhesiti. Moller uye ishamwari yake Kay Fisker uye Povl Stegmann ndivo tsvuku dzakaita-zvidhina zvivakwa. Ivo nevamwe uyewo nevamwe kuti yunivhesiti. Chivako chikuru Kubvira zvakurukurwa mumwe 12 vakawanda mapurani mabasa dzinokosha mune Danish munhoroondo. Chimwe zvakawanda zviri mumwe Most zvinoshamisa Africa.
With pamusoro 44,000 vadzidzi, ndiro yunivhesiti rechipiri pakukura munyika. It unotora kuti mano mana Arts, Science and Technology, utano, uye Business uye Social Sciences.
munyika yose orientated, yunivhesiti ane Exchange zvirongwa panzvimbo pamwe pamusoro 50 masangano pose. Izvi zvinosanganisira University kweArctic, ari Utrecht Network, the Nordic Centre Fudan and the Nordic Centre India.
Aarhus nhema pane chimwe chezvinhu zvinokosha njanji junctions muDenmark. Pane Saatlik kusimuka kuchamhembe, chamhembe, uye kumavirira. From Southern uye Central Europe, kubatana zviri Via Hamburg / Flensburg. Travel nguva kubva Hamburg kuna Aarhus ndiye anenge maawa mashanu. Kubva nyika dzokuEastern Europe vanorovedza kwokubatana kuna Aarhus kuenda Via Poland uye Copenhagen. Aarhus ane Saatlik mabasa uye kubva Copenhagen. The Kuzarurwa ari Tunnel pasi Belt Guru wakaatapudza rwendo ne awa rimwe. The rwendo zvino anotora maawa matatu nehafu. Kune akawanda kwokubatana daily kuna Sweden, Jerimani uye vakasara Europe.
Zvitima takananga Aarhus kuchiteshi siya Copenhagen Airport Hourly. Mutengo uri pamusoro DKK 410 nokuti mumwe-nzira tikiti (kusanganisira chigaro kuchengetedza).
Ready kutanga kuongorora zvaunogona kusarudza? Book chitima tikiti zvino apo inodziya ekunze runogara, achibatsirwa Save A Train!
Unoda embed yedu Blog romukova “The Most Zvinoshamisa Africa In Europe” pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/spectacular-universities-europe/- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)